असन्तुष्टि संबो धन नगरी प्रदेशसभा बैठक बस्दैन | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / असन्तुष्टि संबो धन नगरी प्रदेशसभा बैठक बस्दैन
असन्तुष्टि संबो धन नगरी प्रदेशसभा बैठक बस्दैन
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता January 24, 2018	0 140 Views
कुलप्रसाद के .सी. ‘सोनाम’
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य एवं प्रदे शसभा सदस् य पाच नम्बर प्रदे श
सातवटै प्रदे शका सांसदहरुले आ–आफनै प्रदे शका अस् थायी मुकाममा शपथग्रहण गरिसके का छन् । अब प्रदे शसभा बै ठक र सरकार गठनको तयारी भइरहे को छ । प्रदे श प्रमुख पहिलो प्रदे शसभा बै ठकलाई व्यवस् िथत गर्न सम्बन्धित प्रदे शकै मुकाममा खटिएका छन् । यसै सन्दर्भमा भर्खरै प्रदे श सांसदको शपथ लिनुभएका रो ल्पाबाट प्रदे शसभा सदस् यमा निर्वाचित ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता एवं प्रदे शसभा सदस् य कुलप्रसाद के सी ‘सो नाम’ सग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ ।
शपथग्रहण गर्नुभयो , प्रदे श सरकार गठन कहिले हुन्छ ?
शपथग्रहणको कामबाहे क अरु के ही पनि भएको छै न । अहिले राष्ट्रिय सभा सदस् यको निर्वाचनको तयारी भइरहे को छ । त्यसका लागि हामीहरु दाङ आउ“दै छौ ं । त्यसकारणले प्रदे श सभा गठन र सदन कहा बस् ने भन्ने विषयमा पनि कुनै टुंगो लागे को छै न । तिथि, मिति र स् थानको टुंगो पनि लागे को छै न । त्यसै ले यस विषयमा पहिला त आ–आप्mनो दलका बै ठकहरु बस् लान् । खासगरी पॉ“च नम्बर प्रदे शको अस् थायी मुकाम जुन ठाउ“मा तो कियो त्यसको ठूलो बिरो ध जताततै भइरहे को छ । बिरो धको उचित सम्बो धन नगरिकन प्रदे श सभा, सरकार र त्यसको स् थानको प्रक्रियाहरु अघि बढाउन सकिदै न ।
स्थायी मुकाम तो क्नुभन्दा पहिले नै हो ला नि प्रदे श सभा, सरकार गठनको काम त ?
पहिले नै भए पनि कसरी गनेर् भन्ने विषयमा त साझा धारणा हुनुप¥यो नि । किनकि सभा कहा“ सञ्चालन गनेर् , कसरी सञ्चालन गनेर् भन्ने कार्य विधि त चाहिएला । बिनाकार्यविधि त कसरी बनाउने ? त्यसै ले हाम्रो सुझाव के छ भने हाम्रो पा“च नम्बर प्रदे शमा जति दल छन् तिनीहरुको सर्वदलीय सहमतिमा पहिलो सदन सञ्चालनका विषयमा सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरा नै सही हो  ।
शपथग्रहण, पहिलो सभाकै लागि अस् थायी मुकाम तो के को हो इन र सरकारले ?
अस् थायी मुकाममै गर्नुपर्छ भन्ने के ही छै न । मुकाम जहा पनि हुनसक्छ । जहा सवेर् क्षण गरिएको छ, सबै प्रकारका पूर्वाधारहरु छन् त्यहीं गर्दा राम्रो हुन्छ ।
पहिलो बै ठक कहिले बस् छ त ?
अहिले सम्म मिति तो किएको छै न । प्रदे श प्रमुखलाई हामीले परामर्श गरे र मात्रै मिति तो क्नुस् भने का छौ ं । मिति तो क्दा राजनीतिक तहमा परामर्श गरे र कहा“ सञ्चालन गनेर् भन्ने निधो भएपछि मात्रै मिति तो क्नुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो  ।
यस्तो अड्डी लिएर तपाइहरुले नै ल्याएको संघीयता सफल हो ला त ?
सफल बनाउन त वातावरण पनि हुनुप¥यो नि । कार्यान्वयनकै पहिलो दिनमा सडकमा आगो बल्ने स् िथति आएपछि त्यो विषयलाई नस् वीकारे र कसरी अघि बढ्ने त ? अस् थायी मुकाम पनि न्यायो चित हुनुप¥यो नि । संघीयता कार्यान्वयन भने कै त्यही त हो ला नि ? प्रदे शको उच्च अदालत एक ठाउ“मा, प्रहरीको प्रदे श प्रमुख एक ठाउ“मा, राष्ट्रिय सभा सदस् य निर्वाचनको कार्यालय एक ठाउ“मा तर प्रदे श प्रमुख अकोर् ठाउ“मा कसरी भयो ? संघीयताको मर्म यही हो ? अदालत, प्रहरी दाङमा प्रदे श प्रमुख छ बुटवलमा । सदन भवन छ बे लझुण्डीमा अन्य सबै पूर्वाधारको सिफारिस हुन्छ दाङमा । तसर्थ त्यो सिफारिस समितिले सिफारिस गरे का स् थानमा कार्य सञ्चालन गनेर् गरी सहमतिको प्रवल सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सबै दलहरु समझदारीमा आउनुपर्छ ।
प्रदे श सभा नबस् दै यो छलफल र सहमति हुन्छ त ?
हुनुपर्छ । नत्र पहिलो बै ठकमै नकारात्मक सन्दे श नदिउ भन्ने कुरा हाम्रो हो  ।
अस्थायी मुकामप्रति यति धे रै असन्तुष्टि किन ?
सदन पायक पनेर् गरी तो किनुपर्छ भन्ने हो  । माननीयहरुलाई पनि त्यो ठाउ“ पायक पनेर् गरे र जहा“ सिफारिस समितिले पठाएको छ, त्यहा“बाट कार्य सञ्चालन गर्दा धे रै समस् याका गाठा फुकिन्छन् । मलाई लाग्छ यो नै मिलन बिन्दु हो  ।
भो लि सानैर् परे प्रदे श सभालाई त्यो अधिकार त छदै छ हो इन र ?
स् थायी मुकाम तो क्ने निर्णय प्रदे श सभाले नै गनेर् हो , भो लि गर्छ पनि । रह्यो कुरा त्यतिञ्जे लसम्म हुने कार्यसम्पादन, पूर्वाधारयुक्त भवन, सबै लाई पायक पनेर् ठाउ“मा राखौ ं भन्ने मे रो भनाइ हो  । अस् थायी मुकाम भने को त बै ठक स् थल पनि हो ला नि ? जहा“ सरकारी भवन छन् त्यहा“ प्रदे श सभाको बै ठक राखौ ं । अस् ित उद्यो ग वाणिज्य संघको हलमा शपथ खाएजस् तै विभिन्न हलमा त्यो सम्भव छै न । सदन भने को मर्यादित पनि हुनुपर्छ । त्यसखालको वातावरण हुनुप¥यो  । एक खालको झलक आउनुप¥यो  । त्यसो भयो भने मात्रै उचित कार्यव्यवस् थापन हुन्छ । सभाहलमा गएर कुर्सी ल्याएर त्यो कुनै पत्रकार सम्मे लन हो इन हो ला नि ?
सबै लाई पायक पनेर् कहा हो त ?हामीले भन्ने हो इन, सरकारले आफै ले बनाएको अध्ययन समितिले दिएको सिफारिस, प्रतिवे दन हे रे भइगो नि । प्रतिवे दन हे र्न धौ लाग्यो भने हामी सबै को पायक पनेर् दाङ नै हो  । त्यहींबाट कार्य सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
सम्भव छ त अहिले ?
सम्भव किन छै न ? दुनिया“मा सबै सम्भव हुने एउटा प्रदे श सभा दाङमा सञ्चालन गर्न हु“दै नहुने भन्ने कुनै कारण मै ले दे ख्दै न । स् थायी राजधानीको विषयमा बहस गनेर् समय छ । तर सभा हलकै विषयमा टुगो लगाउ“दा पनि सहमति गर्नुप¥यो नि । जुन मूल्य मापदण्डमा बनाइएको थियो त्यो भन्दा विपरीत भयो , सडक–सडकमा शपथ खाएको जस् तो भयो अस् ित । उद्यो ग वाणिज्य संघको हलमा शपथ खानु भने को कुनै अफिसियली आत्मसम्मानको कुरा गनेर् हो भने त गलत हो नि । कि त प्रदे श प्रमुखको कार्यालयमा शपथग्रहण गराउनुपथ्योर् , प्रदे श प्रमुखक कै कार्यालय निश्चित छै न त्यहा ।
पायक पनेर् ठाउमा स् थायी राजधानीका विषयमा माओ वादी के न्द्रको संसदीय दलमा छलफल हुन्छ त ?
राजधानी पायक पनेर् कुरामा हामी चर्चा गरौ ंला, सभा शुरु गनेर् स् थलमा आन्दो लनको मनो विज्ञान र भावनालाई सम्बो धन गनेर् गरी अथवा त्यो आन्दो लन भन्या सडकमा आउनुलाई मात्रै मानिदै न । सबै प्रदे श सभा सदस् यहरुलाई पायक पनेर् ठाउ“लाई गर्नुपर्छ भन्ने नै हो  ।
दाङलाई सबै प्रदे श सांसदले पायक पनेर् ठाउ ठान्लान् त ?
ठान्नु प¥यो नि त । दूरी नापे र पनि ठान्नुप¥यो नि । हुकाम मै को टदे खि आउ“दा, बर्दियादे खि आउ“दा, दाउन्ने दे खि आउ“दा अलिकति सुहाउ“दो ठाउ“ त चाहियो नि । मान्छे लाई हे प्ने गरी निर्णय गर्दा समस् या आउछ नि । बहुमत संख्या दूरदराजबाट आउने , सीमित ठाउ“लाई चाहि“ के न्द्र बनाउने भन्ने कुराको जुन नियत सरकारले दे खायो नि यो गलत हो भन्ने कुरा हो  ।
प्रसंग बदलौ ं, चुनाव लगत्तै पार्टी एकता भन्नु भएको थियो, किन ढिलाइ भयो ?
लगत्तै सरकार, लगत्तै पार्टी एकता भन्ने कुराका विषयमा चुनावपछिको दुई महिना हुन थाल्यो सबै ले दे खे को कुरा हो  । यसका लागि वै चारिक, राजनीतिक, सांगठनिकरुपले एकताको भाव नमनेर् गरी टुंग्याउनु नै उचित हुन्छ भन्ने मे रो भनाइ हो  ।
एकता हुदै न अब भन्ने आशंका गर्न थालिसके मान्छे हरुले त ?
हो इन । जनतालाई ढाट्ने कुरै हदै न । एकताकै लक्षका साथ के ही सै द्धान्तिक, वै चारिक प्रश्न उठाएका छौ ं । संगठनात्मकस् वरुप पनि टुंग्याऔ ं र एकताको अभियान पनि लै जाऔ ं र यतातिर सरकार निर्माणको काम अभियानात्मकरुपले जाओ स् यसमा सबै ले आत्मसम्मान गनेर् ठाउ“ बनो स् । यसो गरियो भने वास् तविक एकता हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।
सरकार बन्नुअघि एकता हुन्छ ?
त्यो त अहिले भन्न सकिदै न । किनभने कार्यविधि, कार्यसम्पादन, कसरी जाने भन्ने कुरा यो अघि र त्यो पछि भन्ने भन्दा पनि एउटा अभियानमा जाओ स् भन्ने कुरा हो  ।
रो ल्पाली जनता र समग्र पाच नम्वर प्रदे शको विकासका लागि के गर्नुहुन्छ ?
एउटा रणनीतिक कार्यक्रम, तत्कालीन कार्यक्रम विभाजन गरे र गुरुयो जना बनाउनुपर्छ । सबै लाई कमाण्ड, कन्ट्रो ल गर्न पायक स् थलमा राजधानी तो किनुपर्छ । त्यो भयो भने हामीले बुटवल भै रहवालाई ठूलो औ द्यो गिक करिडो र, लुम्विनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बौ द्ध राजधानी, ने पालगञ्ज, को हलपुरलाई अकोर् औ द्यो गिक करिडो र, बर्दियालाई एग्रिकल्चर हव र पहाडी क्षे त्रलाई टुरिज्म हवका रुपमा विकास गरे र प्रशासनिक के न्द्र दाङ बनाउ“दा सबै समुदायलाई सबै क्षे त्रलाई के न्द्रिकरण गर्न सम्भव छ भन्ने हाम्रो कुरा हो  ।
Previous: विद्यालयमा ‘हामी सिक्न सक्छौ ं’ कार्यक्रम
Next: नारायणपुर महोत्सवको तयारी तीब्र
‘स्तरीय र सर्वसुलभ सेवा पु¥याउने दौरानमा छौं’
यात्रुमैत्री सेवा पु¥याउने अभियानमा छौं